ပိုက်ဆံအိတ် အခိုးခံရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော် - APANNPYAY
Home / အဆိုတော်များ / ပိုက်ဆံအိတ် အခိုးခံရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော်
ပိုက်ဆံအိတ် အခိုးခံရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ တင်ဇာမော်
Apann Pyay 4:39 PM အဆိုတော်များ Edit
အမြဲတမ်း အသံအားကောင်းကောင်းနဲ့သီဆိုတတ်ပြီး ဂီတအနုပညာရှင် အချ င်းချင်းပါ လေးစားခံရတဲ့ တင်ဇာမော်တစ်ယောက် ပိုက်ဆံအိတ် အခိုးခံလိုက်ရ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူမဟာ ၂၇ရက်နေ့ညက Novotel Hotel မှာ ကျ င်းပခဲ့တဲ့ ပွဲအတွင်းမှာ သီချင်းဆိုရင်း အခိုိးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီး သူခိုးကလည်း ဓါတ်သိသူခိုးလို့ သူမရဲ့ fb ပေါ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
” ၂၇ရက်နေ့ညက Novotel Hotel မှာ ပွဲတစ်ခုဆိုတယ်.. နောက်ဆုံးပိတ် ဆိုရတာဖြစ်လို့ ဆိုပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ArtistRoom ထဲမှာလူတစ်ေ ယာက်မှမကျန်ခဲ့သလို ကိုယ်ထားခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံလွယ်အိတ်တစ်လုံးလုံး လည်း မရှိတော့ဘူး… cctv checking လုပ်တော့ အဲ့ဒီ အခန်းထဲ camera မတပ် ထားဘူးဆိုပဲ!!! အေးပေါ့ .. ချွတ်ဟယ်ဝတ်ဟယ်တွေမလုံမခြုံဖြစ်မစိုးလို့ ထင် ပါတယ် အမှန်ကတော့ အားလုံးက အိမ်သာခန်းထဲဝင်လဲကြတာပါ.. တပ်ထား သင့်ပါတယ်!! ဓာတ်သိပေါ့ ခိုးသူက…!!! ခုဘဝ မရှိလို့ခိုးတာက ရတဲ့ပစ္စည်း ဘယ်လောက်ကြာအောင်စားရမလဲကွယ်!!! သံသရာတစ်ခုစာ နာမှာ မတွေး မိဘူးလား!!! အပြစ်ခံရတော့ မညည်းကြေးပေါ့!!! ၂၈မနက် London က မိသားစုဆီပြန်ရမယ့်ခရီးရှည်ဆိုတော့ လက်ကျန်မြန် မာငွေအနည်းအပါး နဲ့ ဖုန်း၂လုံး ( အဟောင်းတစ်လုံးထဲမှာက မေ့သမီးလော်ရဲ့ ပုံတွေ အမှတ်တရ )နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအနည်းအပါးပဲပါပါတယ်!!! အား လုံးပြန်ရချင်ရင် ၁၅သိန်းနဲ့၂၀ ကြားကုန်ရမှာပေမယ့် ခိုးသူက ငွေပြန်လုပ်တဲ့ခါကျ တန်သေ လာက်ဘယ်ရပါ့မလဲလေ!!!
ပါသွားတဲ့ MK အိတ်နဲ့ DKNYမျက်မှန်က သူ့ချည်းသုံးလွန်းလို့ ချစ်ရတဲ့အစ်မတ စ်ယောက်ဆိုမမြင်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအိတ်လို့ ပွစိနေသေး…!!!ကံကောင်းချင်ေ တာ့ ခရီးသွားမယ့် passportအိတ်နဲ့တကွ အေ ရးကြီးသော့များစာရွက် စာ တ မ်းများ နိုင်ငံခြားငွေများအားလုံးကို ပွဲသို့ ချီမတက်ခင် အမေ့ကို အကုန်အပ်လိုက် ပြီ!!! ပြီးတော့ ကျွန်မတင်ဇာမော် က စိန်ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများမဆောင် တတ်မဝတ်တတ်ပါ!!!London ပြန်ရောက်တော့မှ ရှာမတွေ့တော့လို့ ခိုးသူ လ က်ထဲပါ သွားပြီယူဆ ရတဲ့ Driving Liscence ကတော့ သက်တောင့်သက် သာ အိမ်မှာကလေး ထိန်းရင်း online ပေါ်က ၁၅မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီး ဖြည့်စရာရှိတာလေးေ တွဖြည့်လို့ £20 ပေးလိုက်တာ လိပ်စာအသစ်နဲ့ပါ upd ate Liscence က ၃ရက်နေတော့ အိမ်ရောက်လာပါရောလား ကွယ် တို့. …!!! ခိုးသူလ က်ထဲ ပါသွားတဲ့ မြန်မာပြည်က မှတ်ပုံတင်အတွက်ကတော့ ဟိုလူဒီလူကယ်ပါပေါ့ ပြန်ရောက်မှ လျှောက်ရတော့မှာပ….!!! မိတ္တူတော့ ရှိတယ်လေ…!!!
1kg လောက်လေးတဲ့( အထဲမယ် ရေသန့်ဗူး၊ အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းများ၊ မလျှော်ရသေးအတွင်းခံတစ်ထည်=ကျန်ခဲ့ရင်အမေလျှော်မိမစိုးလို့အဲ့ဒီနေ့ကနေရာတကာထည့်သွား၊ဘယ်လောက်သုံးသုံးဘယ်တော့မှမကုန်တဲ့အလှပြင်ပစ္စည်းတိုလီမိုလီများ၊ မြန်မာငွေကျပ်၃သိန်းကျော်၊ ဖုန်း၂လုံး၊ မှတ်ပုံတင်+မြန်မာကား လိုင်စင်၊ phone power bank နဲ့ ယိုးဒယားရောက်တုန်းက ပျော်လွန်းလို့ဝ ယ်ခဲ့တဲ့ ဘတ်၁ရာဖိုး၃ရန်တန် fancy နားကပ်များပါတဲ့ ) ပိုက်ဆံ အိတ်ကြီး ကိုArtist Room ထဲ ကနေ တစ်အိတ်လုံးဆွဲပြီးခိုးသွားတဲ့ ခိုးသူကြီးရေ… တစ်သက်စားလောက်စရာမပါပေမယ့် သူတစ်ကာရဲ့ ပစ္စည်း ဥစ္စာများ ခိုးယူခြင်းကြောင့် သူတစ်ပါးတို့ရဲ့နှလုံးသားများ လှုပ်ရှားဝမ်းနည်းစေ မိတာက အလွန်အပြစ်ကြီးသကွဲ့.. ရပ်တန်းကရပ်နော့… မဟုတ်ရင် ရိုးသား စွာတောင်းစားကြတဲ့ သူတွေလောက်တောင်မှ မမြတ်ပဲ.. လောကအလယ် မေတ္တာအပို့ခံရခြင်းက ပိုလို့ ဆိုးတယ်ကွယ်… သံသရာက မလွတ်ခင် ငရဲတွေနဲ့ထပ်လို့ မတွေးဝံ့စရာပါကွယ် ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပါ။
from Tin Zaw Maw’s fb
အမွဲတမျး အသံအားကောငျးကောငျးနဲ့သီဆိုတတျပွီး ဂီတအနုပညာရှငျ အခြ ငျးခငျြးပါ လေးစားခံရတဲ့ တငျဇာမျောတဈယောကျ ပိုကျဆံအိတျ အခိုးခံလိုကျရ တယျလို့ ဆိုပါတယျ။သူမဟာ ၂ရရကျနညေ့က Novotel Hotel မှာ ကြ ငျးပခဲ့တဲ့ ပှဲအတှငျးမှာ သီခငျြးဆိုရငျး အခိုးခံလိုကျရတာဖွဈပွီး သူခိုးကလညျး ဓါတျသိသူခိုးလို့ သူမရဲ့ fb ပျေါမှာ ရေးထားပါတယျ။
” ၂ရရကျနညေ့က Novotel Hotel မှာ ပှဲတဈခုဆိုတယျ.. နောကျဆုံးပိတျ ဆိုရတာဖွဈလို့ ဆိုပွီးပွနျဆငျးလာတဲ့အခြိနျမှာ ArtistRoom ထဲမှာလူတဈေ ယာကျမှမကနျြခဲ့သလို ကိုယျထားခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံလှယျအိတျတဈလုံးလုံး လညျး မရှိတော့ဘူး… cctv checking လုပျတော့ အဲ့ဒီ အခနျးထဲ camera မတပျ ထားဘူးဆိုပဲ!!! အေးပေါ့ .. ခြှတျဟယျဝတျဟယျတှမေလုံမခွုံဖွဈမစိုးလို့ ထငျ ပါတယျ အမှနျကတော့ အားလုံးက အိမျသာခနျးထဲဝငျလဲကွတာပါ.. တပျထား သငျ့ပါတယျ!! ဓာတျသိပေါ့ ခိုးသူက…!!! ခုဘဝ မရှိလို့ခိုးတာက ရတဲ့ပစ်စညျး ဘယျလောကျကွာအောငျစားရမလဲကှယျ!!! သံသရာတဈခုစာ နာမှာ မတှေး မိဘူးလား!!! အပွဈခံရတော့ မညညျးကွေးပေါ့!!! ၂၈မနကျ London က မိသားစုဆီပွနျရမယျ့ခရီးရှညျဆိုတော့ လကျကနျြမွနျ မာငှအေနညျးအပါး နဲ့ ဖုနျး၂လုံး ( အဟောငျးတဈလုံးထဲမှာက မသေ့မီးလျောရဲ့ ပုံတှေ အမှတျတရ )နဲ့ အသုံးအဆောငျပစ်စညျးအနညျးအပါးပဲပါပါတယျ!!! အား လုံးပွနျရခငျြရငျ ၁၅သိနျးနဲ့၂၀ ကွားကုနျရမှာပမေယျ့ ခိုးသူက ငှပွေနျလုပျတဲ့ခါကြ တနျသေ လာကျဘယျရပါ့မလဲလေ!!!
ပါသှားတဲ့ MK အိတျနဲ့ DKNYမကျြမှနျက သူ့ခညျြးသုံးလှနျးလို့ ခဈြရတဲ့အဈမတ ဈယောကျဆိုမမွငျခငျြတော့ဘူးအဲ့ဒီအိတျလို့ ပှစိနသေေး…!!!ကံကောငျးခငျြေ တာ့ ခရီးသှားမယျ့ passportအိတျနဲ့တကှ အေ ရးကွီးသော့မြားစာရှကျ စာ တ မျးမြား နိုငျငံခွားငှမြေားအားလုံးကို ပှဲသို့ ခြီမတကျခငျ အမကေို့ အကုနျအပျလိုကျ ပွီ!!! ပွီးတော့ ကြှနျမတငျဇာမျော က စိနျရှငှေလေကျဝတျရတနာမြားမဆောငျ တတျမဝတျတတျပါ!!!London ပွနျရောကျတော့မှ ရှာမတှတေ့ော့လို့ ခိုးသူ လ ကျထဲပါ သှားပွီယူဆ ရတဲ့ Driving Liscence ကတော့ သကျတောငျ့သကျ သာ အိမျမှာကလေး ထိနျးရငျး online ပျေါက ၁၅မိနဈလောကျအခြိနျယူပွီး ဖွညျ့စရာရှိတာလေးေ တှဖွညျ့လို့ £20 ပေးလိုကျတာ လိပျစာအသဈနဲ့ပါ upd ate Liscence က ၃ရကျနတေော့ အိမျရောကျလာပါရောလား ကှယျ တို့. …!!! ခိုးသူလ ကျထဲ ပါသှားတဲ့ မွနျမာပွညျက မှတျပုံတငျအတှကျကတော့ ဟိုလူဒီလူကယျပါပေါ့ ပွနျရောကျမှ လြှောကျရတော့မှာပ….!!! မိတ်တူတော့ ရှိတယျလေ…!!!
1kg လောကျလေးတဲ့( အထဲမယျ ရသေနျ့ဗူး၊ အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျးမြား၊ မလြှျောရသေးအတှငျးခံတဈထညျ=ကနျြခဲ့ရငျအမလြှေျောမိမစိုးလို့အဲ့ဒီနကေ့နရောတကာထညျ့သှား၊ဘယျလောကျသုံးသုံးဘယျတော့မှမကုနျတဲ့အလှပွငျပစ်စညျးတိုလီမိုလီမြား၊ မွနျမာငှကေပျြ၃သိနျးကြျော၊ ဖုနျး၂လုံး၊ မှတျပုံတငျ+မွနျမာကား လိုငျစငျ၊ phone power bank နဲ့ ယိုးဒယားရောကျတုနျးက ပြျောလှနျးလို့ဝ ယျခဲ့တဲ့ ဘတျ၁ရာဖိုး၃ရနျတနျ fancy နားကပျမြားပါတဲ့ ) ပိုကျဆံ အိတျကွီး ကိုArtist Room ထဲ ကနေ တဈအိတျလုံးဆှဲပွီးခိုးသှားတဲ့ ခိုးသူကွီးရေ… တဈသကျစားလောကျစရာမပါပမေယျ့ သူတဈကာရဲ့ ပစ်စညျး ဥစ်စာမြား ခိုးယူခွငျးကွောငျ့ သူတဈပါးတို့ရဲ့နှလုံးသားမြား လှုပျရှားဝမျးနညျးစေ မိတာက အလှနျအပွဈကွီးသကှဲ့.. ရပျတနျးကရပျနော့… မဟုတျရငျ ရိုးသား စှာတောငျးစားကွတဲ့ သူတှလေောကျတောငျမှ မမွတျပဲ.. လောကအလယျ မတ်ေတာအပို့ခံရခွငျးက ပိုလို့ ဆိုးတယျကှယျ… သံသရာက မလှတျခငျ ငရဲတှနေဲ့ထပျလို့ မတှေးဝံ့စရာပါကှယျ ” ဆိုပွီး တငျထားတာပါ။